Basa reDhipatimendi Rokunyora Mubhizinesi - Semalt Advice
. Iyo inyanzvi yekombiji yekugadzirisa kubudiswa kwemashoko ewebhu asina kugadziriswa uye kuishandura kuva format yakarongeka. Dhiyabhorosi kunyanya kunosanganisira kupfuurira URL uchishandisa robot uye kushandisa XPath, CSS, REGEX kana imwe nzira yakakodzera kuti ibvise ruzivo rwaunoda kubva pawebhu. Nokudaro, inopa nzira yekuunganidza ruzivo rwekutsvaga kubva pawebhu.
Ikozvino, kune dzakawanda zvekutsvaga dambudziko remhinduro-kubva pane zvizere zvinogadziriswa zvigadzidzo zvinogona kushandura zvikamu zvose muhutano hwakagadzirirwa kushandiswa kwezvinhu-izvo zvinoda kuedza kwevanhu.
Kuverenga zvinyorwa kune zvisingagoni kuverengwa. Heano ndiyo inowanzoshandiswa ye web scraping mubhizinesi:
1. Kuchengeta kuvapo kwepaIndaneti
Chimwe chezvinhu zvinokosha zvekutsvaga data ndechokuti inogona kushandiswa kukwidza mapurogiramu ebhizinesi nekuongororwa pamawebsite. Mashoko akawanikwa anogona kubatsira kuongororwa kwebasa rekushandisa, kushandiswa kwevatenzi, uye maitiro, nezvimwewo. Webcraping scraping inogona kutarisa uye kutarisa makumi ezviuru zvemapurogiramu emashandisi uye kuongorora kwavo izvo zvingabatsira zvikuru kubhizinesi analytics.
2. Kubudisa chigadzirwa uye mutengo wedhadhi dzekuenzanisa nzvimbo
Kune nzvimbo dzinochengetedza nzvimbo dzepawebhu dzinokambaira uye dzinopedza zvigadzirwa zvemiti, tsanangudzo, uye mifananidzo kuwana dare rekuenzanisa kana kubatana. Dhesi yakawanikwa pamitengo inogona kubatsira mumatengo ekugadzirisa, iyo yakaratidza kuti inovandudza purogiramu yemiganhu neyemazana yezana. Mabhizimisi ari mumabhizimusi e-commerce anogona kushandisa zvinyorwa zvinowanikwa zvinyorwa zvekuchera dhiyabhorosi kuve nechokwadi chokuti vanopa maitirwo akaisvonaka nguva yose.
3. Kuongorora kwevatengi uye kuratidzika
Izvi zvinowanzoitwa nemitsva itsva / mawebsite kuti vanzwisise vateereri vavo. Nyaya yakatsvaga inogona kushandiswa kuziva maitiro evateereri. Nokuda kwemugwagwa, izvi zvinogona kubatsira kugovera nhau dzakananga kune vataridzi. Zvamunotarisa paIndaneti, somuenzaniso, zvinopa maitiro ekutevedzera iyo webhusaiti inogona kushandisa kuti uzive zvauri kuda chaizvo.
4. Kugadzirisa mukurumbira uri paIndaneti
Nhasi, makambani ari kupedza mamiriyoni mukuchengetedza kuvapo kwepamusoro paIndaneti, uye kubvisa webhupu kunoramba iri imwe yenzira dzinokosha zvikuru dzechinangwa ichi. Dhimbwa data inogona kutaurira zvakawanda pamusoro pehutano hwehutano hwehutungamiri hwekombiyuta sezvo hukubatsira kuti unzwisise vateereri vaunotarisira kuitika pamwe nenzvimbo dzinogona kukuvadza mukurumbira wako. Nevamwe vanovimba netsika yewebhu, munogona kutora pachena vatungamiri vemafungiro, manzwiro mumagwaro, maitiro anowedzera, uye nhamba dzevanhu zvakadai sezera uye zvepabonde. Iwe unogona kushandisa ruzivo urwu kuti uwane zvakanaka.
5. Kucherechedza maitiro ekunyengera
Opinion spamming , kana kunyorwa kwekunyepedzera mazano uye maonero ekutsausa verenga vave chinhu chakanyanya kufungira vanhu vanovimba nemavhura ekutenderera uye maonero nekuda kwezvinangwa zvakasiyana. Kushanda kwewebhu kunogona kubatsira mukukamba kwezvinyorwa zvakanyorwa, kuongorora vechokwadi, nekuona uye kudzivisa vanyengeri.
Muzera redu remashoko makuru uye kukwikwidzana kuwedzera, kushandiswa kwekutsvaga deta hakugoni. Bhizimisi rako rinogona kuwana kana imwe nzvimbo iyo data yewebhu inogona kuiswa kushandiswa kunobatsira. Dhaka kuverenga zvinosanganisira chikamu chikuru chebhizimisi rezana remakore rechi21 Source .